Warkii.com-News and information about Somalia XASAASI: Sheekada Filimka Padmavati Oo Macquul Ah In Qaab Siyaasadeysan Isku Bedesho - Warkii.com-News and information about Somalia
XASAASI: Sheekada Filimka Padmavati Oo Macquul Ah In Qaab Siyaasadeysan Isku Bedesho
Filimka Sajey Bhesali ee Padmavati ayaa maalmahaan qabsaday gudaha India iyo daafaha caalamka waxaana uu noqday filimka ugu hadal heynta badan,sababtoo ah baaritaanka lagu haayo filimkaan ayaa noqday mid dheeraday oo waqti badna qaatay.
Padmavati oo ah filim ka hadlaya dhaqanka ayaa la sheegay inuu wax badan lagusoo bandhigaya kuwaas oo dhaawacaya caado dhaqameedka India , sidaas darteeda waxaa la joojiyey xilligii la daawan lahaa.
Dad badan ayaa taageero u muujiyeen oo ah in la fasaxo filimkaan lagana qaado xayiraada saaran sababtoo ah loomaba arko inuu yahay filim dhibaato wata , waxaana taageerida kuso biiray dad caan ah.
he Indian Film and TV Directors’ Association (IFTDA) ayaa taageertay filimkaan, waxaana shirkadaan ay sheegtay inaysan wax dhibaato ah ka qabin filimkaan waxayna u aragtaa inuu yahay filim iska caadi ah oo dhacdo ka hadlay kumana saleeysana in la bedelo dhaqanka.
Shir weyn ayey qabteen waxaana ka hadlay mid kamid ah madaxda ugu caansan shirkadaas kana mid ah soo saariyaasha sheekooyinka filimaanta ee lagu magacaabo Ashok Pandit waxaa uu sheegay in filimka Padmavati loo adeegsanayo awod gaar ah , sababtoo ah ilaa iyo hada laguma arko wax qaladaad ah.
‘’Isbar bar yaaacaan iyo go’aanadaan waalida ah , waxaa ay dhaaweceysaa hab siyaasadeedkeena , sidaas darteeda waxaa wanaagsan inaan joojino baaritaankaan waalida ah,’’ ayuu Yiri Ashok.
‘’Sanjey Leela aragtideysa shaneemo kuma saleysna siyaasad, waa maxay sababta aan mar walba uga hadalnaa waxyaabaha la sixikaro , maxaa qaldan ? Maxaa la sameeyaa waa su’aalo cad oo jawaab loo helikaro , balse sidaan macquul ma ahan.
Arintaan ayaa laga yaabaa in xal loo helo , waxaana macquul ah in filimkaan la fasaxo todobaadyada soo socda.
Waxaa Qoray: Amoore Barre